5 tii ugu fiicneyd ee 3D Touch ee iOS 9 | Wararka IPhone
5 tii ugu sarreeysay ee 3D Touch ee iOS 9
Cristina Torres sawir-haye | | Jailbreak
Dunida JAILBREAK waxaa ka buuxa tweaks xiiso leh oo looga faa’iideysto howlaha kala duwan ee iPhone-ka. Xaaladdan oo kale waxaan dooneynaa inaan ka soo kabanno qaar ka mid ah kuwa halyeeyada ku ahaa balooggeena iyo kuwa kale oo ay u badan tahay inaadan aqoon. Fikradda midaynaysa dhammaantood waa in loogu talagalay inay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​mid ka mid ah hal-abuurnimadii ugu dambeysay ee Apple: waa 3D Taabo macruufka 9.
Kuwa aan kuu soo bandhigi doonno xiga waa taxane dhan oo isbeddello ah oo aad ku qaban karto waxyaabo ka badan wixii iPhone-kaaga kuu oggolaaday illaa hadda iyo waxbadan ka hel 3D Touch. Marka haddii aad ka mid tahay kuwa adeegsada ee tixgelinaya in shaqadani tahay mid ka mid ah kuwa ku guuleystay shaqeynta ugu badan shaashaddaada terminal, waxaan u maleynayaa inaad jeclaan laheyd inaad ogaato dhammaan isbadalkan. Iyo haddii aadan wali sameynin JAILBREAK, waxaa laga yaabaa inay yihiin hal sababood oo kale oo ay kaaga dhaadhiciyaan wax kasta oo terminalku uu ku kordhin karo haddii aad haysato. Halkaas ayey tagayaan!
In Actualidad iPhone horey ayaan kuugu sheegnay wax ka beddelka. Xaqiiqdii, waad la tashan kartaa maqaalka buuxa oo aan ku sharaxeyno howlaha iyo Astaamaha lifaaqa. Si kastaba ha noqotee, kuwa ku soo gala liiskan iyaga oo aan horey u maqal, waxaan kuu sheegayaa inay tahay qalab kuu oggolaanaya inaad horay u aragto walxaha ugu horreeya ee aad ku hayso galka si toos ah u kicinaya 3D Touch dushiisa shaashadda guriga. Waa bilaash, markaa wax kharash ah kuguma fadhin doono inaad isku daydo inaad aragto sida amarku uga shaqeeyo iPhone-kaaga.
Haddii aad tahay horumariye, waxaad u maleyneysaa inaad qadarin doontid liistada horumarsan ee Apple kugu siineyso gudaha App Store si aad u maamusho una cusbooneysiiso barnaamijyadeeda. Taasi waa sida saxda ah waxa tweak-kani kuu samaynayo kaydinta Cydia. Marka haddii aad ka mid tahay kuwa u heellan soo saarista qalab cusub ka faa'iideyso iPhone-ka iyo JAILBREAK waa inaad heysataa. Dheeraad ah, waa bilaash
Hadaad waligaa rabtay awood u yeelashada isticmaalka 3D Touch si aad wax badan uga hesho muusikadaada, markaa kani waa isbeddelka aad u baahan tahay. Xaqiiqdii waxay qabato waxay abuureysaa saameyn la mid ah sida rasmiga ah Apple waxay ku dartay barnaamijkeeda Muusikada illaa iyo tan xigta (U gudub midka xiga) laakiin adoo adeegsanaya dareemaha taabashada. Si aad uga faa'iideysato, markii aad ku dhexjirto arjiga muusikada, waa inaad riixdo inaad dhaqaajiso dareeraha oo aad ku darto heesta la doonayo si ay u noqoto tan xigta ee loo ciyaaro. Gabi ahaanba waa bilaash, markaa waxaad si fiican u tijaabisaa si aysan kuu sheegin.
Haddii aad ka mid tahay isticmaaleyaasha ay tahay inay jaangooyaan dhowr digniino si ay uga kacaan sariirta, waxay u badan tahay inaad ku aragto isbeddelkan runtii mid xiiso leh. Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud, laakiin weli waa mid xiiso leh. Waxay ku filnaan doontaa in la kiciyo dareeraha taabashada meel kasta oo madhan oo shaashadda ah si loo soo bandhigo qalabkan oo aad si dhakhso leh ugu abuuri karto qaylo-dhaan mahad sanduuqa waqtiga. Sideed u aragtaa fikradda? Farsamayntaani sidoo kale waa bilaash.
Xaaladdan oo kale, tweak wuxuu ka faa'iideysanayaa shaqada taabashada shaashadda si dadka jecel sawir qaadista ay uga faa'iideystaan ​​daqiiqadahaas ay tahay in lagu qabto waqtigaas oo keliya. Waxaan sidoo kale sameynay falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan tweak-kan, Tilmaan oo toogasho, kaas oo si toos ah loogu duubo kamarad kamarad leh kaliya dhaqaajiso 3D Touch.
Miyaad horeyba u ogayd isbeddelladan inaad ka faa'iidaysato 3D Touch ee iOS 9?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » 5 tii ugu sarreeysay ee 3D Touch ee iOS 9
Bakhaarka App ayaa kor u qaaday qiimaha markale gobolada qaarkood
Apple waxay maamuus u siisaa Martin Luther King boggeeda rasmiga ah